Blockchain समाचार 24.09.2018 - Blockchain समाचार
सेप्टेम्बर 24, 2018 व्यवस्थापक
बी फाउन्डेसनले Bitcoin वातावरण विकास गर्न योजना शुरूआत
बी फाउंडेशन आज आधिकारिक शुरू भएको थियो कि नयाँ Bitcoin जग हो, रीगा मा बाल्टिक Honeybadger Bitcoin सम्मेलन मा आउने घोषणा संग, लाटविया. बी फाउन्डेसनले Bitcoin इकोसिस्टमका विकास थप गर्न खोज्ने. बी फाउंडेशन को तैयार योगदान को परिणाम रूपमा के भयो @sysmannet @francispouliot_ @Trezor @WhalePanda @starkness @ adam3us @giacomozucco @AlenaSatoshi @hodlhodl @lopp & थप.
यो भइरहेको छ!
हामी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ "बी" को प्रकारको समर्थन @AlenaSatoshi @ adam3us @starkness @giacomozucco @pavolrusnak @slushcz @francispouliot_ @keidunm @kanzure @lopp र थप चाँडै घोषणा गर्न।. pic.twitter.com/Ahi536OGX2
— बी (@TheB_Foundation) सेप्टेम्बर 23, 2018
ब्राजील सबैभन्दा ठूलो दलाली एक गुप्त विनिमय सुरु गरिएको छ
ब्राजील सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र दलाल को अभिभावक कम्पनी एक cryptocurrency विनिमय स्थापना गरिएको छ. समूह XP, जो दलाली दृढ XP Investimentos मालिक, को मा मंच सुरु गर्न योजना “आ महिना,” यो Bitcoin मा व्यापार समर्थन हुनेछ थप्दा.
साओ पाउलो मा एक घटना मा बोल्ने, फर्म गरेको कार्यकारी अधिकृत, Guilherme Benchimol, भने: “हामी यो बजार मा अग्रिम सुरु गर्न बाध्य महसुस गरे।” स्वराङ्कित XDEX - - Benchimol फर्म विनिमय सुरु गर्न निर्णय गरे कि यसो उद्धृत थियो किनभने3लाख या त Brazilians पहिले नै केही Bitcoin स्वामित्व, जबकि टाढा कम, वरिपरि 600,000, स्टक मा होल्डिंग्स छ.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 23.09.2018
$75.9एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
Bitcoin बढ्न नयाँ सबै तिवारी ...
वाह! 1,000,000,000 XRP Unlocke...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 20.09.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 25.09.2018